Momba ny XINXIANG
Basketball misy lamina
Baolina vita amin'ny baolina kitra sy baolina laminina
Baolina kitra fingotra sy baolina kitra
Golf Surface Rubber Football & Soccer baolina
Pebble & Grain Surface Rubber Football & Soccer baolina
Baolina kitra vita amin'ny kitra matevina ambonin'ny tany sy baolina kitra
Fitaovana baolina kitra sy baolina
Latina: Mandritra krizy mafy ny orinasan-tena lehibe
Factory: CANGZHOU XINXING INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
Mba hanaterana ny basikety eo ho eo amin'ny mpanjifa dia manomboka miasa ao anaty tsindry ny orinasa.
Raha ny baiko nihemotra, nahazo ny baiko niverina avy amin'ny mpanjifa taloha izahay ary nangataka ny daty fandefasana basikety 200.000 No. 3
Aorian'ny fifandraisan'ny maro, araka ny toe-java-pihanaretina dia mampiseho taratra ny tsy fahampian'ny herin'ny mpiasa sy ny toe-javatra manokana izahay. Niakatra ny vidiny, saingy noho ny mpanjifa taloha, tsy nampiakarina ny vidiny, ary maharitra telo volana ny fotoana fandefasana
Taorian'ny nahazoana ny valiny, ny mpanjifa dia nanisika ny handefa ao anatin'ny iray volana sy tapany ary nitaky ny fampihenana 5% noho ny toe-javatra misy ny areti-mifindra sy ny habetsany.
Hariva: taorian'ny fivoriana dia nanatsoaka hevitra izahay fa na ny vidiny dia tsy azo ampidinina, ary ny fandefasana azy tsy azo atao arakaraka ny ora takiana, noho izany dia tafavoaka ny serasera tamin'ny mpanjifa
Taorian'ny fifandraisana dia nanapa-kevitra ny orinasa fa hividy fitaovana fikosoham-bary 20 hampitomboana ny famokarana sy hiomanana ho an'ny mpiasa vaovao ao anatin'ny fanerena ara-bola be loatra
Taorian'ny nilazana tamin'ny mpanjifa fa azo tanterahina ny datin'ny fandefasana, dia nampiadana ny tontolo hifampitohy izahay ary namporisika tamim-pahatsorana ny asa manaraka - fifampidinihana amin'ny vidiny.
Alina: Nahazo ny vaovao avy tany amin'ny orinasa aho fa matotra ny fihanaky ny valanaretina ary mety hiatrika fanakatonana indray ny orinasa. Nahazo ny mailaka ihany koa aho fa afaka mameno ny filaminana ny mpanjifa araka ny voalahatra. Natahotra be aho ary efa nitady vahaolana
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa avy amin'ny governemanta sy ny orinasa, afaka mandray mpiasa am-pahombiazana ireo mpiasa izay tsy afaka miasa noho ny fihanaky ny areti-mifindra ary mahazo ny taham-bola fanondranana isan-taona amin'ny orinasa sasany, dia afaka manatanteraka ny politikan'ny orinasa ny orinasa.
Manatratra fifanarahana amin'ny mpanjifa ary manasonia fifanarahana
Ny fandefasana entana amin'ny entana voalohany amin'ny fotoana sy ny habetsahany
Fanaterana ny entana sisa tavela ara-potoana
Vahoaka: + 86-18633709069
Vahoaka: + 86-13931744623
Trano Changsheng No.76, Làlana Huanghe, Distrikan'i Xinhua, Tanànan'i Cangzhou, faritany Hebei Sina